Fandaharan'asa - Naina ANDRIANTSITOHAINA Naina Andriatsitohaina
Fanolorana ny kandidà, ny fahitany, ny fanolorany ary ny fandaharan'asany
NY FOKONOLONA, IVON-TOERAN’NY ASAN’NY KAOMININA
Antananarivo no ataontsika sopitry ny fomba fiainana malagasy vaovao, izay ao anatin’ny fihavanana, ny fifanajàna ary ny fiaraha-monina.
Izany vondron-tanan-dehibe izany dia hiorina amin’ny fokontany, izay andry ianteheran’ny fiaraha- monina hatrizay.
Ny fokontany amin’izao dia tsy mahavaly ny filan’ny mponina ho an’ny fitantanana mirindra, ara- panjakàna sy ara-bola. Amin’ny maha rafitra roa mifanindran-dàlana azy, dia tsy voafaritra tsara ny fifampizaran’ny andraikitra. Mila hazavaina izany mba hanafaingana, hampahomby, ary hampaharitra bebe kokoa ireo tetikasam-piaraha-monina ho an’ny tanàna.
Tsy vitan’olon-tokana ny fanavaozana an’Antananarivo. Mila ny fiarahantsika mientana manodidina ny Ben’ny tanàna.
Zava-dehibe ny famerenana ny firaisankina eo anivon’ny olona sy ireo rafitra misy ao anatin’ny fiaraha-monina.
Firaisankina eo amin’ny taranaka : ny tanora, ny ray aman-dreny sy ireo zokiolona dia tokony hahay hiara-hiaina indray, ao anatin’ny fandalàna ny fihavanana, ny kolontsaintsika ary ny lalàna.
Tokony samy manana ny toerana misy azy avy ny tsirairay ao anatin’ny firaha-monina. Tokony samy handray ny andraikiny avy ny tsirairay, ka samy hanana ny toerany, ny andraikiny ary ny fahamendrehany.
Singanina manokana ireo zokiolona, izay naetry tany amin’ny toerana tsy mendrika ny kolontsaintsika, tsy mendrika ny taonany, tsy mendrika ireo zava-bitany ho antsika. Manana adidy ny hamerina azy ireo ao amin’ny fiaraha-monina isika.
Ao amin’ny fokonolona no hiresahana ireo olana, ireo tetikasa ary ireo fanapahan-kevitra mikasika ny fokontany. Ny komitin’ny olon-kendry, izay solotenan’ny zokiolona dia handray anjara mavitrika ao anatin’ireo dinika.
Firaisankina eo amin’ny samy Fokonolona : Tokony ho arovana ny fifanakalozana ara-kolontsaina mba hanamafy ny firaisankina. Hisy fikarakaràna manokana momba ny famoronana sy ny mari-tranon’ireo toeram-ponenana sy tanàna sosialy.
Firaisankina eo amin’ny mpitarika sy ireo mponina : Tsy maintsy hiankina aminin’ny fokontany ny kaominina eo anivon’ny fandraisana fanapahan kevitra. Izy ihany koa no antoky ny fanatanterahana sy tompon’andraikitra ara-bolan’ireo zava-miseho eny an-toerana.
FANATSARANA SY FANOHANANA NY MAHASOA NY MPONINA
Noho ny filàna maika sy lehibe takian’ny vahoaka, ity fandaharan’asa ity dia hiompana bebe kokoa any amin’ny asa sosialy.
Ny laharam-pahamehana dia ny fanatsaràna miandalana ny fari-piainan’ny mpiara-belona, izay manao laharam-pahamehana ireo zo fototra tokony hananan’ny mponina :
- Ny fisitrahana rano madio, ny toeram-pivoahana, ny toeram-pidiovana ho an’ny rehetra
- Ny fahadiovan’ny tanàna, ny fitantànana ny fako sy ireo rano maloto
- Ny fahazavana ho an’ny rehetra
- Ny fisitrahana tobim-pahasalamana akaiky ny mponina
- Ny fanabeazana ho an’ny ankizin’ny kaominina
- Ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana
Ny fanadiovana ny fitantanam-bolan’ny kaominina dia ahafahana mahazo vola entina manao asam-pokonolona (HIMO) izay hankinina amin’ny RF2 ho fikajiana ireo fokontany, ho fidiram-bola ho an’ny tsirairay, ary hampandray andraikitra ireo fokontany.
Fampitomboana ireo toeram-pandraisana olona (CAS) ka ho itarina ny andraikiny
amin’ny fandraisana ireo tra-doza sy niharan’ny herisetra.
Fanorenana toeram-pandraisana alina ho
an’ireo tsy manan-kialofana.
Fampiverina ireo tsy manan-kialofana ao anatin’ny fiaraha-monina, iarahana miasa
miaraka amin’ny akany AKAMASOA sy ny UNICEF.
Fametrahana toeram-pandraisana vonjimaika ho an’ireo ankizy iharam-boina
sy vehivavy iharan’ny herisetra isaky ny boriboritany.
Fametrahana fandaharan’asa fanampiana ara-tsosialy ho an’ireo ankizy iharan’ny
Fametrahana fandaharan’asa filamatra ho an’ny fanorenana toeram-piandrasan-jaza
ho an’ny daholobe
Fanamoràna ny fahafahan’ireo manan-kilema manatona ny tranon’ny kaominina.
Fametrahana toeram-pisakafoanana ho an’ireo zokiolona
Hampitomboina ireo hotely zazakely ho an’ny ankizy latsaky ny 6 taona
« Mila miara-mientana isika mba hamerina ny fahaiza-miaina ao anaty fiaraha-monina, ary hanova ny fomba fisainana ka hanorina fanentanana sy fiainana izay mendrika antsika »
Fanavaozana ary famatsiana fitaovana manara-penitra ireo sekoly fanabeazana fototra (SFF) eto an-tanàna
Fametrahana toeram-pisakafoanana manara-penitra, izay manaja ireo otrikaina ilaina eny amin’ny SFF.
Fametrahana fampianarana manokana ho an’ireo tsy maharaka any am pianarana, fanabeazana ara-pitondran-tena miaraka amin’ny mpampianatra sy ireo zokiolona.
Famatsiana toeram-pianarana mazava, maoderina ary voaaro ahafahana manao enti-mody sy kilasy hariva ho an’ireo tanana sasantsasany.
Famatsiana « tablette » ireo toeram-pianarana, hatao nomerika ireo bokin-tsekoly sy ireo fampianarana fanabeazana ara-pitondran-tena.
Fahasalamana manakaiky ny mponina
Fanavaozana ary famatsiana fitaovana manara-penitra ireo tobim-pahasalamana (CSBII) 4 eto amin’ny Kaominin’Antananarivo Renivohitra (KAR)
Fanorenana tobim-pahasalamana vaovao ireo boriboritany roa (2) mbola tsy manana
Fanavaozana ny toeram-pitsaboana nify ao amin’ny Birao Monisipalin’ny Fahadiovana (BMH) sy ireo tobin’ny mpamono afo izay efa ela tsy voakarakara.
Fanavaozana ny tobim-piterahan’ny kaominina ao Namontana mba ahafahana mandray ireo reny sahirana
Fanitarana ny andraikitry ny tobim-pahasalamana CSB II
Hasiana kamiaom-pitsaboana mandehandeha sy arifomba ahafahana manao fizahana akaikin’ny mponina, indrindra raha sendra loza voajanahary.
Hasiana fiaram-pitondràna marary monisipaly izay atao amin’ny vidiny mirary
Hatao izay hananan’ny tobim-pahasalamana (CSB II) izay rehetra ilaina amin’ny famatsiana fanafody sy fitaovana.
Fampiroboroboana ireo ivon-toerana manampy eo amin’ny saram-pitsaboana, izay misokatra ho an’ireo sahirana
Hatao izay hahafahan’ny ankizy eny amin’ny SFF ahazo fizahàna fitsaboana manakaiky azy.
Fampiharana mandaitra ny fehezan-dalàna monisipaly momba ny fitandremam-pahasalamàna :
Fanatsaràna ny fisitrahana rano fisotro madio, fitandremam-pahasalamana, ary ny fahadiovana
Fanorenana toeram-pivoahana, toeram-pidiovana ary toeram-pantsakan-drano
Hasiana toeram-pidiovana manara-penitra isaky ny SFF.
Hasiana toeram-pivoahana azo afindra ihany koa eny amin’ireo toerana manahirana..
Hatao maimaimpoana ireo toeram-pivoahana ho an’ny daholobe ary ho karakaraina isan’andro miaraka amin’ireo fokontany sy fikambanana.
Fampitomboana ireo fandavahan-drano hameno sinibe ahafahana mamatsy ireo toeran-drano.
Hasiana siniben-drano eny amin’ny faritra stratejikan’ny kaominina, ary ampiarahina amin’ny rafitra fanodinana ranon’orana.
Hiara-hiasa amin’ireo minisitera voakasika sy ireo mpiara miombon’antoka.
Fametrahana ny rafitra maharitra ho fitantanana sy fikajiana ireo fananana iombonana izay mifanaraka amin’ny fehin-dalàna mikasika ny rano.
Fampivoarana ny fanajan’ny fokonolona ny soa iombonana.
Fitantanana ny saram-pivarotan-drano eny amin’ny toeram-pantsakàna.
Fanabeazana ireo mpianatry ny SFF momba ireo toetra mahomby ho an’ny fahadiovana.
Fahadiovan-drano : ireo rano
maloto sy ranon’orana
Hazavaina amin’ny antsipiriany ny andraikitr’ireo
o Lakan-drano voalohany : APIPA (Andriantany)
o Lakan-drano faharoa : SAMVA (Fanariana ny
o Lakan-drano fahatelo (KAR/Fokontany)
Havadika kovetam-pitahirizan-drano, misy sivana,
ireo toerana mitahiry rano tsy ilaina.
Haverina amin’ny laoniny ny lalam-pivoahan-drano sy
ny fanadiovana ny lakan-drano rehetra eny anivon’ny
Hampanarahana rafitra ny asan’ny mpanadio fotaka
Hampitomboina ireo toerana manao asam-
panodinana misy, ho jiron’ny tanàna na koa etona ho
Fampahafantarana ny lalàna sy fitsipika manankery
misahana ny fitandremam-pahasalamana an-
Fanabeazana ireo olom-pirenena mba hiova toetra
Fanetsehana ny ambaratonga rehetra ary ho
ampiharina ny sazy
Hatao modely ny mpiasan’ny kaominina
Fitantanana ireo fako / Fanadiovana ireo lalana, lalan-
kely, sisin-dàlana, ary tatatra
Fanomezana andraikitra ny tokantrano tsirairay, ny mpivarotra, ny orinasa amin’ny fanadiovana ny misy azy sy ny manodidina.
Ny KAR no tokony ho tompon’andraikitry ny SAMVA.
Havaozina ny rafitry ny RF2 ho tena sampan-draharaha manokan’ny KAR.
Hasiana rindran-damina vaovao ny fandraofana ireo fako amin’ny alalan’ny RF2.
Iarahan’ny Fokontany sy ny KAR miantoka ny karaman’ny RF2
Hatevenina ny isan’ny RF2 isaky ny misy asam-pokonolona (HIMO) izay iantohan’ny KAR.
Ho raràna tsikelikely ny fampiasana harona plastika eto Antananarivo Lehibe.
Hanara-maso ny fahadiovan’ny tanàna sy lalan-kely ireo mpiasa monisipaly
Ho saziana mafy ireo manary fako tsy manara-dalàna.
Hampitomboina ireo toeram-panariana fako ambaratonga voalohany (RF2) sy ireo antonontonony (dabam-pako)
Hampanajaina ny fotoan’ny fanariam-pako
Hapetraka ny lamina mahomby momba ny fandraofana sy fitaterana ny fako
Hampiharina ny fitsipiky ny fahadiovana ho an’ny mpivaro-kena sy mpivaro-trondro
Hapetraka isaky ny foibem-barotra vaventy ny rafitra fanavahana sy famerenana ireo pila efa niasa, takamoa, plastika ary hijery mpiara-miasa ho fanodinana azy ireny.
Hamporisihina ireo mpivaro-tsakafo eny amoron-dalana hiditra ami’ny sehatry ny ara-dalàna sy hanàja ny fitandremam-pahasalamana
Hapetraka ny tetika ho fanomezan-danja ny fako ho famokarana herinaratra
Hasiana fandaharan’asa ho an’ny fanadiovana ireo fako plastika (izay iarahana miasa amin’ny ireo fikambanana tsotra sy ireo tsy miankina amin’ny fanjakàna)
Hapetraka miaraka amin’ireo mpanao taozava-baventy, ny toeram-panariana fako ho
Fitandrovana ny fandriampahalemana sy
Hazavaina ireo lalana sy lalan-kely.
Hasiana fomba vaovao hanazavana ny tanàna amin’ny alalan’ny masoandro
Hapetraka ny fifanarahana amin’ny JIRAMA mba hametrahana ireo andraikitry ny tsirairay
Hasiana tsato-by vaovao izay misy fiarovana amin’ny fandrobàna sy fanimbana
Ho isaina ireo takamoa simba, ho vidiana, ary iaraha-miasa amin’ny JIRAMA ny fanoloana azy
Hampandraisina andraikitra ny fokontany tsirairay mba hiaro ireo fananana iombonana isaky ny faritra misy azy
Hapetraka ny toby fitandroana filaminana manakaiky ny mponina
Hiara-hiasa amin’ny polisy nasionaly, indrindra amin’ny fametrahana borigady mitambatra
Fametrahana vavahady fiarovana eny amin’ireo toerana mafana mety hitera-doza, ary hisy fiaraha-miasaamin’ny fokontany
Hasiana fakan-tsary fanaraha-maso eny amin’ireo toerana mampitebiteby
Hasiana toerana monisipaly ho fanaraha-maso ny fifamoivoizana sy ireo toerana mampitaintaina
Hofanina ary ho hamafisina ireo loharanon-mpitaovana sy ny mpiasa ao amin’ny polisy monisipaly
Hapetraka ny antso an-tariby maimaimpoana ho fifandraisana amin’ny vahoaka (laharana maitso)
Hampiharina ny fehezan-dalàna mikasika ny fivarotana zava-pisotro mahamamo ivelan’ny toerana nahazoan-dalana sy natokana ho an’izany
Ho raisina ny fepetra manoloana ireo tabataba manelingelina ny filaminam-bahoaka
o Tabataba atoandro na alina
o Fitaovana fanamafisam-peo
Fampiharana hentitra ireo fotoam-pisokafana sy fikatonan’ny « bar » sy « karaoke »
Fiarovana sivily sy fitantanana ireo loza voajanahary
Hotolorana kamio vaovao ireo toby mpamono afo
Hasiana toby vaovao eny amin’ireo boriboritany mbola tsy manana (faha2, faha4, faha5)
Hatsaraina ary hampitomboina ireo paompi-drano famonoana afo
Hasiana borigady manokana afaka mivezivezy ho an’ny loza tampoka
Hamafisina ny fahafahan’ny vahoaka miaritra amin’ireo loza voajanahary (rivo-doza, tondra-drano, horohoron-tany...)
Fanorenana sekoly monisipaly ho an’ireo mpamono afo izay afaka mandray mpamono hafa avy any amin’ireo tanan-kafa
Fanovana ny foto-pisainana
Fiovan’ny toetsaina sy fanabeazana ara-pitondratena
Fanamafisana ny maha-modely ny mpitondra (fitondratena).
Hiady amin’ny tsy fanaraham-pitsipika (tsy fanajàna, tsy fanarahan-dalàna, tsy fandraisana andraikitra amin’ny olom-pirenena iharan-doza...)Haverina ny fandaharan’asa momba ny fanabeazana ara-pitondratena eny amin’ny sekolim-panjakàna
Hamorona sy hampiana tosika ireo hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny tsy fanaraham-pitsipika
Hamorona fiombonanan’ireo tsara sitrapo eo amin’ny sehatra isan-karazany (mba hanamafy ireo
mpiasan’ny kaominina : mpamono afo, mpitsabo, fiarovana ny tanàna...)
Hiara-hiasa amin’ireo fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakàna, ireo mpiara-miombona antoka teknika sy ara-bola ary fikambanana eny amin’ny fokontany, izay iarahana amin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ary ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera ho an’ireo hetsika maha olom- pirenena.
Ho velomina indray ny onjam-peo sy ny fahitalavitry ny KAR
ADY AMIN’NY KOLIKOLY, FAMPIROROBOANA NY FITANTANANA TSARA RINDRA SY NY MANGARAHARA AO ANATIN’NY KAOMININA
Efa mahenika ny fiainana andavan’andron’ny mponina ny kolikoly, amin’ny zavatra rehetra, n’aiza n’aiza, ary na oviana na oviana. Ny marefo no tena matetika iharan’izany.
Ny ady amin’ny kolikoly dia aniisan’ny fototry ny fitantanana ny tanàna. Tsy maintsy ho hentitra izany ary tsy mitanila : tsy hisy fandeferana.
Mila ny fiarahantsika rehetra mientana izany mba hiarovana ny olom-pirenena amin’izay fikarakarana taratasim-panjakàna rehetra sy mba hamerenana ny fitokisana eo amin’ny olom-boafidy sy ny vahoaka.
Ny kaontin’ny kaominina dia hatao mangaraharaha tanteraka, ary voaaramaso.
ADY AMIN’NY KOLIKOLY, FAMPIROROBOANA NY FITANTANANA TSARA RINDRA SY NY MANGARAHARA AO ANATIN’NY FITANTANAN’NY KAOMININA
Hapetraka ho mangaraharaha ny fanarahamaso, ny fitsirihana ary ny fanamarinam-bola
Hatao izay ahazoana ny fanamarinana « quitus » avy amin’ny mpanolotsaina monisipaly sy ny minisiteran’ny vola sy ny tetibola.
Hangataka fiaraha-miasa sy fanampiana amin’ny Fitsarana ny kaonty ho an’izay fanarenana tokony hatao
• Fametrahana politikan’ny serasera amin’ny sehatra lehibe
• Famolavolàna ny bokin’ny fomba fanarahan-dalàna isaky ny sampam-pitantànana
• Fanehoana eny amin’ny peta-drindrina ireo anaran’ireo tompon’andraikitra
• Fametrahana « birao tokana » ho fandoavam-bola rehetra
• Fametrahana ny fenitra arak’asa
Tsy fitanilàna :
• Fanehoana ny fe-potoana fikarakaràna taratasy
Ny fifanampiana :
• Fampilazàna sy fanohanana ireo fangatahana rehetra
• Famoronana sampan-draharaha hisahana ny fandraisana ireo fitoriana
Fanarahamaso matetika ataon’ny sampan-draharaha mifandray amin’ny foibe momba ireo rantsana afaka manome fanomezan-dàlana, fanorenana, toeran-tsena sns...
Famolavolana fandaharan’asan-tserasera momba ny andraikitra sy toeran’ny KAR sy ny olom-pirenena tsirairay avy.
Famatsiana fitaovam-piasana mahomby ireo sampan-draharaha isaky ny boriboritany (solosaina, skanera,...)
Fametrahana tahirin’angona an’ny kaominina (kopia, fahaterahana, toeram-ponenana, karapanondro...)
Fampifandraisana ireo boriboritany enina amin’ny tambajotra sy tranonkala
Fametrahana rafitra ho fitantanana ny toeram-piandrasana eny anivon’ny sampan-draharaham- panjakana
Fanatsarana ny sampana miady amin’ny kolikoly ao amin’ny kaominina : fiaraha-miasa miaraka amin’ny Bianco sy ny « Transparency International Initiative Madagascar »
Fisavàn’ny IGE ny kaonty.
Fametrahana toeran-tserasera handraisana ireo fitarainan’ny mponina mikasika ny kolikoly nahazo azy tao amin’ny kaominina.
Fampidirana ireo fitarainana momba ny kolikoly sy ny tsy fahafam-po ho fanatsaràna ny fitantanan’ny KAR.
IREO TSENA KELY, FOTOTRY NY FANDROSOAN’NY TOEKAREN’NY TANANA NY FANDRAHARAHANA, ANTOKY NY FAMPANDROSOANA
Ireo tsena kely dia tokony ho tohanana ary hampiana satria izy ireny no mamelona tokantrano maro. Kanefa, tokony hasiana lamina tsara ary tokony ho ara-dalàna.
Ny fampidirana ao amin’ny sehatry ny ara-dalàna ireo izay mbola tsy anaty rafitra dia fototra iray ijoroan’ny rariny sy ny hitsiny ara-tsosialy sy ara-toekarena.
Homena zo izay voafaritry ny lalàna ny mpivarotra, indrindra mba hampaharitra ny asany. Manana adidy ho an’ny fiaraha-monina izy ireo amin’ny maha mpivarotra azy.
Tokony samy hanana ny toerany avy isika tsirairay ao anatin’ny fiaraha-monina.
Ny arabe dia natao ho an’ireo fiara, ny sisin-dàlana ho an’ny mpandeha tongotra, ary ny tsena ho an’ny mpivarotra. Andraikitry ny kaominina ny manitatra sy mandamina ireo tsena, manamboatra ireo sisin dàlana sy ny lalana.
Ny tsenam-pokontany milamina sy voaaro dia isan’ny lalana iray ho fampiroboroboana ny varotra akaiky ny monina sy ny firaisankinan’ny vahoaka.
Andraikitry ny Kaominina no mametraka toeram-pandraisana sy fanohanana ireo tanora ho fanokafana ny orinasana, fampiroboroboana ny fandraharahana maitso sy ny fandraharahana ara-teknolojika.
IREO TSENA KELY, FOTOTRY NY
FANDROSOAN’NY TOEKAREN’NY TANANA
Fampanarahan-dalàna ireo mpivarotra
mandehandeha (sisin-dàlana sy arabe)
Hampanarahan-dalàna ireo asa madinika amin’ny alalan’ny fanomezana kara-piasana
isaky ny sehatr’asa, ary ho amporisihina ny fametrahana rafitra isaky
ny sehatr’asa (mpivarotra kojakojam- piarakodia, mpivarotra hanimasaka, mpivarotra anana)
Hamafisina ireo fikambanan’ny mpivarotra ary hatsaraina ny fifandraisana miaraka amin’ny KAR
Hampiakarina ny tsena sasan-tsasany ary hasiana toeram-piantsonan’ny fiarakodia ao ambany
Hatao lalan-tongotra ny ampahan-dàlana sasantsasany mandritry ny andron’ny tsena
Ho entanina ireo mpivarotra ho madio, hahay handraoka sy hanary ny fako ao amin’ny
toeram-panariam-pako, ary koa mba tsy hanentsina ny fivoahan’ny rano maloto
Hosaziana tsy misy fepetra ireo mpamatsy fitaovana ireo mpivarotra mandehandeha
Hasiana lisitra sy fanisàna ireo mpivarotra
Havaozina ireo tsenam-pokontany
Hanorina kioska manaraka ny rafitra isaky
Hamoraina ny fifandaminana eo amin’ireo
mpampiasa ary homena andraikitra izy
Hanorina tobi-pivarotana lehibe na tsena
ambony rihana voatokana.
Hapetraka ny toerana manokana
hivarotana fiarakodia efa niasa,
Hasiana fanamafisam-peo eny amin’ny
toerana sasantsasany toy ny tsena.
Fampivelarana ny toetsaina mpandraharaha ho an’ny mpivarotra
Hapetraka ny sata misahana ny mpivarotra ara-dalàna ary hodinihina ny rafitra fandoavan-ketra
Hofanina sy ho tohanana ireo mpivarotra amin’ny fitantanam-bola tsotra
Hampahafantarina sy hofanina momba ny fehezan-dalàna sy ny fanaraham pitsipika
Hampiarahina ny fampiofanana fandraharahàna
Ho entanina ny mpivarotra amin’ny fanajàna ny fananana iombonana sy ny tombotsoa iombonana
Fandraisana anjara amin’ny asa fanarenana / fikajiana
Halamina ireo topam-pamokarana sy fivezivezin’olona amin’ireo tanana hafa mba hampitombo ny fifandraisana
Ho entanina ireo mpivarotra anana sy legioma momba ny lanjan’ny vokatra biolojika.
FANDRAHARAHANA, ANTOKY NY FAMPANDROSOANA
Fandaharan’asa ho an’ny taninketsan’ny orinasa eo amin’ny kaominina :
o Fanofanana arak’asa iarahana amin’ny CCIA
o Fanofanana eo amin’ny fandraharahana
o Fahazoana famatsiam-bola
o Sehatra ho fanampiana ny fandrosoan’ireo orinasa
o Fametran-drafitra (sekretarià iombonana sy ivon-toerana amin’ny fitantanana kaonty)
o Fampiroboroboana ny fanofanana ireo fikambanana mpanadraharaha
Fandaharan’asa manokana atokana ho an’ny vehivavy sy ny tanora
Fanomezana asa mendrika
Fampiroboroboana ny toetsaina mpandraharaha
Famporisihana ny fampiasana ireo tanora eto antananarivo (18 ka hatramin’ny 35 taona)
Fampiroboroboana ny toetsaina tia mandraharaha eny anivon’ny sekoly :
o Hetsika isan-karazany sy fifaninana
o Fanohanana, fandrindràna na fitsaràna ireo fifaninànan’ny tanora mpandraharaha
o Fanofanana ireo mpianatra amin’ny tontolo nomerika.
Famporisihana ny fiaraha-miasa miaraka amin’ireo fikambanan’ny mpampiasa :
o Fifanakalozan-kevitra sy fifanampiana
o Fanomezana asa vaovao miaraka amin’ny fanofanana
o Fizarana traikefa miaraka amin’ireo tanora mpandraharaha
Famporisihana ny fandraharahana nomerika amin’ny alalan’ny fanorenanana trano monisipaly ho an’ny teknolojia.
ADY AMIN’NY FITOHANAN’NY FIFAMOIVOIZANA
Manana andraikitra hanatsara ny fitantanana ny fitaterana eto an-drenivohitra ny kaominin’Antananarivo.
Ny firindran’ny fifamoivoizana dia miankina amin’ny fanarahana ireo fitsipika izay
mihatra amin’ireo mpamily rehetra eto an-drenivohitra, fa indrindra koa ireo mpandeha tongotra.
Zava-dehibe ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ireo mpanasazy eny an-dalam-be mba hampihatra an-tsakany sy an-davany ny lalànan’ny fifamoivoizana.
Hanorina sy handamina ny toeram-piantsonan’ny fiarakodia isika mba hirindra ny fijanonan’ny fiara.
Tsy ho feno setroka intsony i Antananarivo ary tsy ho lasa tananan’ny fitohanan’ny fiarakodia intsony.
Fanamafisina ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny fifamoivoizana an-tanan-dehibe
Hapetraka ny borigady fanaraha-maso ireo polisy miara-miasa amin’ny KAR
Hamafisina ny fiofanan’ireo polisy monisipaly amin’ny ady amin’ny kolikoly
Iaraha-miasa amin’ny BIANCO, dia hametrahana ivon-toeram-pifandraisana (zotra maitso iadiana amin’ny kolikoly) mba handraisana ireo fitarainan’ny vahoaka iharan’ny tsy ara-dalàna na vavolombelona ara-kolikoly.
Fametrahana fakantsary fanarahamaso ny fifamoivoizana
Fampiakarana ny sandan’ny lamandy ary ho tohanana ireo mpanasazy
Hatao maoderina sy nomerika ny fomba fanasaziana
Hankinina amin’ny DGSR (Direction Générale de la Sécurité Routière) ny ny fikarakarana ny fizahàna fiara, ary homena andraikitra hafa ny OMAVET
Fanatsaràna ny fitantanam-pilaharana eny amin’ny fiandrasana taxibe
Hatsaraina ary hafindra eny amin’ny toerana malalaka ary lavitry ny sampanana ny toeram-piandrasana taxibe
Hasiana filaharana manokana ho an’ireo zokiolona, vehivavy mitondra vohoka ary ireo sembana
Hampahatsiahivina ary ho hamafisina ny sazin’ireo mpitondra taxibe noho ny tsy fanajana ny toeram-pialan’ny mpandeha
Hasiana fiaraha-miasa eo amin’ny KAR sy ireo mpitantana takelaka dokam-barotra (Ny fiandrasana taxibe dia hatao takelaka dokam-barotra)
Fampihenana ny fitohanan’ny fiarakodia
Halamina ireo topan’ny fivezivezin’ny fiara (Lamina vaovaon’ny fifamoivoizana)
Ho fehezina ny fivezivezena amin’ny alalan’ny fampiharana hentitra ny lalànan’ny fifamoivoizana
Hapetraka ny fanomezan-dàlana hitondrana « moto »
Hapetraka ny borigady mivezivezy manaramaso ny fifamoivoizana
Ho tolorana fiara mpaka fiara ny KAR
Hampanajaina ny lalàna mifehy ny hamafy sy ny antsipiriany ara-teknikan’ireo fiara kodiaran-droa
Harenina ireo takela-by mahakasika ny fifamoivoizana
Hasiana toeram-piantsonana ifandimbiasana eny amin’ny kion-dalana sasan-tsasanyHatsaraina ireo toeram-pijaonan’ny fiara ary hamorona vaovao misy rihana
Hapetraka ny fisian’ny fiara fitateram-bahoaka ny hariva (amin’ny 7 ora ka hatramin’ny 9 ora alina)
Hatsaraina ny rafi-pametrahana lamandy sy sazy
Hanorina toeram-pitahirizana fiara tratry ny sazy
Hasiana toeram-pamotehana fiara
Hampanarahina fotoana ny ora fivezivezen’ireo sarety sy posy
Ny sarety manana kodiarana « pneu » ihany no mahazo mivezivezy
Hasiana lalana manokana amin’ny toerana mety izany, ho an’ny sarety sy posiposy
Hasiana lalana manokana ho an’ireo mpandeha bisikileta ho fanentanana ny olona tsy handeha fiarakodia foana
Hasiana tetikasa vaovao ho fandrindrana ny fitateram-bahoaka
Hampiroboroboana ny fitaterana ambony rano amin’ny ireo toerana mety izany
Homena fiofanana ireo mpitondra taxi amin’ny fahaiza-miaina sy fanetretena
Hasiana fanadinana sy fangatahan-dalana manokana ho an’ireo izay te ho mpitondra fiara taxi na taxibe
Hampatsiahivina sy hamafisina ireo lalàna sy fehezan-dalàna manankery misahana ny fifamoivoizan’ny fiara
Fanentanana momba ny fanajàna ny mpandeha tongotra sy ny toerana fiampitana
Ho raràna ireo fiantsonana eny amin’ny sisin-dàlana
Ho entanina ireo mpitondra fiara mba hamela toerana eo anelanelany ho an’ireo mpitondra « moto »
Hampiharina tsikelikely ireo fenitry ny aro-loto izay hajaina mandritry ny fizahana ny fiara
Ho entanina ny taxi-moto hiofana momba ny sehatr’asa sahaniny amin’ny alalan’ny fahazoana kara-piasàna
NY FANATANJAHANTENA SY NY FIALAMBOLY, FANAINGA MAMPIRAY HINA NY TANORA
Tanora salama, voaaro amin’ny zava-mahadomelina sy ny zava-pisotro mahamamo, tsara fanabeazana sy voahofana no harena voalohan’ny fiaraha-monina. Tsy maintsy omena azy ireo ny fomba hahafahany mivelatra amin’ny alalan’ny fanatanjahan-tena sy ny hetsika ara-tsaina mampivoatra mba hampiroboroboana ny firaisankina sy ny fifandraisana ara-piarahamonina.
Ny fanetsehana ireo fikambanana, ny famerenana ireo fifaninanana ara-
panatanjahan-tena sy ara-tsaina eny anivon’ny sekoly dia hampivelatra foto-
pisainana izay ilaina amin’ny fandrosoan’ny tanora.
Izany fandaharan’asa izany dia mba ahafahan’izy ireo ho mafy sy mavitrika, mitondra avo ny ambopom-pirenena
Hanao ezaka manokana ny kaominina ho fanavaozana sy fanatsaràna ireo
fotodrafitr’asa ho an’ny fanatanjahan-tena izay efa ratsy.
Hasiana toeram-pialamboly eny amin’ny fokontany
Hampitomboina ireo kianja fanaovam-baolina eny
Hanorina tranoben’ny tanora
Hampiasaina ny taranja be mpilalao ho fanainga mampiray hina ny tanora sy ho tia mandray anjara
amin’ireo fifaninana misy
Famporisihana ny fandraisana
anjaran’ireo fikambanana tanora
eny amin’ny faritra sy nasionaly
(Ny tanora no
Hasiana fifaninanana eo amin’ny samy fikambanana
Ho entanina ny fikambanana amin’ireo voka-dratsy
ateraky ny zava-mahadomelina
Haverina ny fifaninanana ara-
panatanjahantena eo anivon’ny
Hamorona fandaharan’asa amin’ny haino aman-jery mahakasika ny tanora eo anivon’ny kaominina
Halamina ny fifaninanana isan-tsekoly, iarahana amin’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena
Hamorona sy hamolavola fandaharan’asa ho an’ny serasera, fampahafantarana ary fanentanana ho an’ny tanora sy ny fikambanany
Mamorona rindranasa haino aman-jery natokana ho an'ny tanora sy ny fampiroborobona ny fahatanorana ho an'ny tanora any amin'ny ambaratonga monisipaly
ANTANANARIVO , TANANA MAINTSO
Mijaly amin’ny tsy fahampian’ny zava-maitso i Antananarivo. Mijaly amin’ny tsy fahampian’ny tontolo maitso i Antananarivo. Mijaly amin’ny fahalotoana Antananarivo.
Hanajary tontolo maitso ny kaominina eny amin’izay toerana rehetra azo anaovana izany. Afaka hisitraka izany ny mponina eny amin’ny fokontaniny avy ary ihany koa eny amin’ireo valan-javaboary lehibe, izay hohatsaraina ihany koa.
Ireo tanin’ny kaominina rehetra ivelan’ny ivon’ny tanàna dia hovolena hazo avy amin’ny taninketsan-janakazo sy ireo tahirijava-maitso an’ny Kaomina izay adino.
Ny fanangonana ireo fako dia vaidohandraharaha amin’ny fanadiovana ny tanàna.
Ny fanodinana ireo fako ireo dia loharano hahafahana mamokatra angovo maitso
sy madio hanampiana ny famatsian-jiro ho fanazavana ny tanàna
ary ho kojakojaina ny tontolo
Hamoronana tontolo maitso vaovao, valan-javaboary botanika ary zaridaina
Hapetraka ny fiaraha-miasa amin’ny orinasa, ireo klioba eo ami’nny sehatry ny fanamboarana sy fikolokoloana toerana maitso an-drenivohitra
Hatao laharam-pahamehana ny fikajiana sy ny fanondrahan’ireo tsy an’asa ny tontolo maitso
Hampiroboroboana ireo fandaharan’asa fanorenana
Hamafisina sy ho tohanana ny
fitantanana ny valan-javaboary
Hasiana fiaraha-miasa miaraka amin’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika momba ny fanomezam-pitantanana ny valan-javaboary Tsimbazaza
Hatao maimaim-poana ny fitsidina ny valan-javaboary Tsimbazaza ao amin’ny zaridaina, ary misy sarany ny ao amin’ny biby
Fambolena manodidina ny
Hampiroboroboana ny fandaharan’asa momba ny fambolena tsy manara-toetrandro
Hampiroboroboana ny fanaovan-jaridaina ao an-tanàna
Hampiroboroboana ny fambolena mijidina
Hampiharina ny politika
fitahirizana sy fiarovana ny
tontolo maitso efa misy
Hatevenina ny fitantanana sy ny fikajiana ny tontolo maitso efa misy
Ho fantarina sy ho azo ambolena ireo toerana eto an-drenivohitra
Hamboly hazo maro eny amin’ireo toerana voafaritra
Hasiana fandaharan’asa ho fambolen-kazo eny amin’ireo vohitr’Analamanga
Hasiana fanarahamaso matetika ireo fambolena efa vita
Harovana ny lakan-drano sy renirano Vohitsara
Hasiana fiaraha-miasa eo amin’ny SNGF, MNP ary ny MEF
Hamboarina ny zaridainan’Ambohijatovo.
Hofehezina Ikopa sy Mamba hitahiry ny ekolojia'ny toeram-pambolena sy fiompiana amin'izao fotoana izao.
Hamboarina ny sisin’ny lakan’Andriantany ary
hamoronana tontolo maitso
Hmboarina ny sisin'ny lakandranon'i Andriantany ary atao tontolo maitso. Hasiana voa azo iampitana
ANTANANARIVO, RENIVOHITRA ARA-KOLONTSAINA SY ARA-TANTARA
Antananarivo dia tanànan’ny maritrano voarindra sy soa, ny lalankely dia mafafinaritra lalovana eny amin’ireo tanàna niorina fahiny, toerana fitazanana tena mahafinaritra, ary ireo harena maro eo aminy. Ireo rehetra ireo dia mendrika ny omen-danja, ho an’ny hambompontsika, ary ho an’ny fizahan-tany ihany koa.
Hojerena manokana ny fikajiana azy ireo sy ny fanavaozana azy ary ny fampiasana ireo harena tsy manampaharoa ireo ho an’ny taranaka ankehitriny sy ny fara aman-dimby.
Ny fampiroboroboana ny kolontsaina eny anivon’ny tanàna amin’ny alalan’ny « kianjan’ny fokontany » dia hahafahana manome lanja ny hira gasy, ny tantara an-dampihazo ary ny dihy. Havaozin’ny Kaomina ireo Tranompokonolona ary haverina amin’ny antom-pisiany.
Famporisihana ireo hetsika fanehoana ny fahasamihafana
amin’ny alalan’ny firoboroboan’ireo orinasam-pamoronana
Fametrahana politika ara-kolontsainan’ny kaominina
Hasina tahirin’angona ho an’ireo rafitra misehatra amin’ny kolontsaina
Hampanarahina fenitra ireo fotodrafitrasa ara-kolontsaina monisipaly sy tsy miankina
Famoronana tranon’ny kolontsaina eny amin’ireo fokontany stratejika (oh : akaiky anjerimanontolo)
Famoronanana tetikasa mikasika ny fampahafantarana ny tantara ara-kolontsaina sy ny vakoka
Fanohanana ny ady amin’ny hosoka ireo famokarana, iarahana amin’ny OMDA sy ny OMAPI
Hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny samy kaominina (manodidina sy ny iraisam-pirenena)
Fanomezan-danja ireo fety mitondra ny anaran’Antananarivo
Fametrahana fanofanana ara-kolontsaina ho an’ny SFF amin’ny boriboritany 6
Fanohanana ny fisokafan’ireo trano fijerena sarimihetsika
Famerenana sy fiarovana ireo toerana ahafahana mizaha sy
mitrandraka ireo vakoka manan-tantara
Fanohanana ireo tetikasa fanavaozana ny tanana avo ary ny fampidirana azy ho vakoka iraisam-pirenenan’ny UNESCO
Fampiroboroboana ireo fampirantiana nasionaly sy iraisam-pirenena ao amin’ny tranon’ny kaominina
Fiaraha-miasam-pitantanana miaraka amin’ny minisiteran’ny serasera sy kolontsaina
Fandrindrana ny fanajariana ny tany mifanaraka amin’ny tantaran’ny Renivohitra
Fampidirana ny masoivoho fanajariana an’Antananarivo Renivohitra (IPAM) ao anatin’ny tetikasam-pitantanana (GUGA) ary ny fanajàna ny fehezan-dalàna misahana ny fanatsaràna ny tanàna
Fanisana ireo toerana manan-tantara isaky ny boriboritany
Fametrahana didim-pitondrana monisipaly momba ny fiarovana ireo toerana manan-tantara
Fiarovana ireo toerana ireo
Fitrandrahana ireo toerana manan-tantara
Fiarovana ny manodidina ny Rova Manjakamiadana
Fanomezan-danja ny soatoavina malagasy ao amin’ny
fanabeazana ny fiaraha-monina amin’ny alalan’ny
tranon’ny kolontsaina sy ny zava-kanto
Fampiroboroboana ny zava-kanto eny amin’ny tontolo maitso
Fanatsaràna sy fanavaozana ny tranom-boky monisipaly
Fanavaozana ireo tranom-pokonolona
Fanatsaràna ireo tranoeva fivarotana eny Analakely amin’ny maha vakoka ara-kolontsaina eto an-drenivohitra azy
Fanamboarana tranom-boky sy foiben’ny kolontsaina madinika akaiky ny mponina ary misokatra ho an’ny rehetra
Fanomezana vatsim-pianarana sy mari-pankasitrahana monisipaly ho an’ireo OLOM-PIRENENA MENDRIKA
Fanomezan-danja ireo vakoka tsy azo tsapain-tanana eto
Famerenana ireo takelaka mitondra ny anaran’ny lalana
Homena lanja ireo vakoka tsy azo tsapain-tanana toy ny fanisana ireo mpivarotra hani-masaka et ireo tsena kely fatan-daza (sakafo, mozika gasy sns...)
Hasiana andro voatokana ho an’ny vakoka ahafahana manao fitsidihana ireo fananana iombonana : Lapa-panjakàna Ambotsirohitra
FAMPIROBOROBOANA NY TOERAMPONENANA MENDRIKA SY FANOMEZAN-DANJA IREO TRANO MIORINA
Manana andraikitra ny Kaomina hanao izay hisitrahan’ny mponina trano fonenana sahaza indrindra ireo marefo. Irahana amin’ny sehatra tsy miankina sy ny mpamatsy vola, dia hisy fotodrafitrasa sosialy ho fampiroboroboana ny toeram-ponenana hametrahana manokana ireo izay tena sahirana.
Ny fampivelarana ny toeram-ponenana dia lohahevitra iray manan-danja ao anatin’ny politikan’ny tanàana ary hanana toerana lehibe ao anatin’ny fifanakalozana amin’ny governemanta sy ireo mpandraharaha amin’ny fanorenan-trano.
Handray anjara amin’ny famatsiana ny fanatsaràna ny tanana ny kaominina amin’ny alalan’ny fametrahana hetra mahasarik’olona.
Homena alalana ireo fampidirana jiro sy rano, na dia tsy manana fahazoan-dàlana manorina mba hahafahan’izy ireo miverina amin’ny ara-dalàna.
Ny tanjona dia hanorina tanana madio, milamina ary mivelatra isika. Ka ireo trano baoritra sy ireo fanorenana ratsy sy simba dia ho voasolo toerana mahafinaritra, milamina ary maha-te honina.
FAMPIROBOROBOANA NY TOERAM-PONENANA MENDRIKA SY FANOMEZAN-DANJA IREO TRANO MIORINA
Hampatsiahivina ny fehezan-dalàna misahina ny fiarovam-pahasalamàna sy ny fanadiavana ny trano isaky ny taona farafahakeliny
Homena fahazoan-dalana ny fanotofan-tany raha toa ka misy fikarakarana voahomana sy lakan-drano
Ho an’ireo izay efa nanototra, dia manana adidy amin’ny fanatsaràna sy fanarahana ny fenitry ny tanàna
Hasiana fanisàna ho an’ireo faritra manodidina azo anorenana
Hasiana toeram-ponenana sosialy mendrika ho an’ireo faritra manodidina ny renivohitra
Hasiana vavahady hidirana voaaro eny amin’ny toeram-ponenana voatokana
Ho arovana ireo tompon-tany amin’ny alalan’ny famerenana amin’ny laoniny ny kadasitra
Hampiroboroboana ny fomba ahazoana misitraka ny rano fisotro madio sy jiro eny amin’ny toerana saro-dàlana nefa tongan’ny JIRAMA
Ho ferana ireo fanorenana tsy ara-dalàna
Harafitra sy hampiroboroboana ny fivoaran’ny fanorenana tranobe sy toeram-panorenana voatokana eny amin’ny tanàna manodidina ny renivohitra